घर अमेरिकी फुटबल स्टोरीहरू ब्राजिलियन फुटबल खेलाडीहरू रफिन्हा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो रफिन्हाको जीवनी - राफेल डायस बेलोली - ले तपाईंलाई उनको बाल्यकाल कहानीको बारेमा तथ्यहरू बताउँछ। साथै, उसको प्रारम्भिक जीवन, परिवार अभिभावक, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली र नेट वर्थमा सत्य।
छोटकरीमा, यस लेखले राफेल डायस बेलोलीको इतिहास चित्रण गर्दछ। Lifebogger ब्राजिल मा आफ्नो शुरुआती दिन देखि शुरू हुन्छ, जब उनी प्रसिद्ध बने लीड्स युनाइटेड। तपाईंलाई यस बायोको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ उहाँको जीवन प्रक्षेपको चित्रण सार हो।
राफिन्हाको जीवनी - लीड्स संयुक्त फुटबलर।
हो, तपाईं र मलाई थाहा छ उहाँ हुनुहुन्छ मार्सेलो बिएल्साको योद्धा एक हुन लीड्स स्थानान्तरण २०२० मा सम्पन्न भयो, रफिन्हा फुटबल विजार्ड हो। ब्राजिलियन जस्तो देखिन्छ एन्जिल डि मारिया प्रविधि मा। हामी रफिन्हालाई उनको गति, ट्रिक्री, महान पहिलो स्पर्श, क्रसका लागि आँखा र डिफेन्डर्सलाई एकमा हराउन सक्ने क्षमताका लागि जान्दछौं।
प्रशंसकको बावजुद, हामी रफिन्हाको जीवन कहानी थोरै फ्यानहरू मात्र जान्दछौं। हामीले तपाईंको पढाइको आनन्दको लागि यो तयारी गरेका छौं। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
राफिन्हाको बाल्यकाल कहानी:
जीवनी सुरु गर्नेहरूको लागि, उहाँ वास्तविक नामहरू राख्नुहुन्छ; राफेल डायस बेलोली। रफिन्हा केवल एक उपनाम हो। उहाँ डिसेम्बर १ 14 1996 XNUMX को १th औं दिनमा आफ्ना माता-पिता, श्रीमती र श्रीमती मनिन्हो बेलोलीमा जन्मनुभएको थियो। फुटबलरको जन्म स्थान पोर्टो एलेग्री, दक्षिणी ब्राजिलको शहर हो।
रफिन्हाका आमा बुबाले उनलाई धेरै कलिलो उमेरमा पाएका थिए, र यस्तो देखिन्छ कि उनका बुबा फरक नागरिकतामा छन्। युवा देखिरहेको बुबा (मनिन्हो) इटालियन छन् जबकि उनकी आमा ब्राजिलियाली हुनुहुन्छ। जसरी अवलोकन गरियो, फुटबलरले उनको आमाको जीन पछ्यायो - जुन उसको परिवारमा सब भन्दा बलियो देखिन्छ।
रफिन्हाका अभिभावकलाई भेट्नुहोस्। के तपाई अचम्मित हुनुहुन्छ कि उनको बुबा सेतो हुनुहुन्छ?
राफेल डायस बेलोली एके राफिन्हाले बाल्यावस्थाका दिनहरू रेस्टि in्गमा बिताए। यो पोर्टो एलेग्री मा एक नम्र पड़ोसी हो। यो ब्राजिलका एक खाँचोमा परेका समुदायहरू मध्ये एक हो जससँग नागरिकहरू छन् जुन खेलमार्फत जीवनमा जितेका छन्। लीड्स युनाइटेड फुटबलर फरक छैन। उहाँ त्यस्ता बच्चाहरू मध्ये एक हुनुहुन्थ्यो जसले त्यस्ता फुटबल योजनाहरूबाट फाइदा लिनुभयो।
रफिन्हाको परिवार पृष्ठभूमि:
रेस्टिन्गामा, बेलोली परिवार फुटबल प्रतिभा उत्पादनको लागि प्रसिद्ध छ। हाम्रो आफ्नै आफ्नै राफिन्हा त्यो प्रख्यात थर राख्छ। बेलोलिसले एक मध्यम-वर्ग परिवार चलाउँछन्, र तिनीहरू फुटबलको वरिपरि तिनीहरूको पेशा केन्द्रित गर्दछन्। त्यो खेलकुद घरहरूमा, रफिन्हा आफ्नो पुस्ताको भाग्यशाली हो। ब्राजिलका फुटबलरले सुन्दर खेलमा सफलता सबैभन्दा बढी देखेका छन्।
सत्य कुरा के हो भने, रफिन्हाको जीवनीमा धनीको लागि कुनै चिन्ता छैन किनकि उहाँ फुटबलर बन्न धेरै कष्ट भोग्नुभयो भन्ने तथ्य बाहेक। तसर्थ, उनको परिवार औसत ब्राजिलियन नागरिकको रूपमा बाँचिरहे।
रफिन्हाको परिवार उत्पत्ति:
फुटबलर ब्राजिलको पोर्टो एलेग्रेको सब भन्दा ठूलो उप-सहरबाट आउँछ। के तपाईलाई यो शहर याद छ? ... यो फुटबल कथाको घर हो - रोनाल्डिन्हो.
यहींबाट राफिन्हाको परिवार आउँदछ।
रफिन्हाको परिवारको जरा रसिa्गाबाट छ, जसको घर २ different विभिन्न शान्ती-शहरहरू छन्। यस क्षेत्रको एक लोकप्रिय बस्ती हो जसलाई इल्होटा भनिन्छ। त्यो छरछिमेकबाट आएका भएता पनि, फुटबलर त्यति गरीब थिएन किनकि उसको कडा परिश्रम गर्ने बुबाले कहिल्यै त्यस्तो घटना घटाएनन्। अनुसन्धानमा यो छ कि श्री मनिन्हो बेलोली र उनको परिवारका सदस्यहरूसँग (राफिन्हा सहित) इटालीको नागरिकता छ।
शिक्षा र क्यारियर निर्माण:
रफिन्हा, धेरै महत्वाकांक्षी फुटबल बच्चाहरूको जस्तै, कहिल्यै सामान्य स्कूली शिक्षा प्रणालीको माध्यमबाट गइन। ती युवाले मोन्टे कास्टेलोबाट फुटबल शिक्षा प्राप्त गरे। यो विश्राम क्षेत्रको मुख्य फ्लड प्लेन टोली मध्ये एक हो।
यस फुटबल स्कूलबाट पारित भएका धेरै युवाहरू पेशेवरहरू बने। यद्यपि रफिन्हा ती मध्ये सबैभन्दा सफल छ। फुटबल परिवारको जराका लागि धन्यबाद, सबैलाई पहिले नै उसको स्वाभाविक गुणस्तर थाँहा थियो। केटाको रूपमा पनि, राफिन्हाले फ्लड प्लेन खेलहरूमा वयस्कहरूसँग फीचर गर्छिन्। त्यस पछि, उनले ड्राईबलि and र गोल गर्ने कार्यको साथ ठूला केटाहरूलाई बदनाम गरे।
रफिन्हा अनटोल्ड फुटबल कहानी:
युवा बढ्दै जाँदा, उसले आफ्नो टीमलाई सबै चीज जित्ने मद्दतको व्यापार राख्यो। त्यस पछि, रफिन्ह खेल शैलीले फुटबल एलिटहरूबाट धेरै ध्यान आकर्षण गर्‍यो। तिनीहरू सामान्यतया आउँदो फुटबल ताराहरूलाई उसको गृहनगरबाट प्रशंसा गर्न आउँदछन्। यस्ता मध्ये दन्त्यकथा थिए रोनाल्डिन्हो.
पहिलेको रूपमा, पातलो युवा फुटबलको पौराणिक कथा भेटेर डराए। रोनाल्डिन्होसँग पहिलो भेट भनेको हास्य पुस्तकबाट एक सुपर हीरो देखेको जस्तै थियो। जब रफिन्हाले सोचे कि सबै ठीकठाक हुँदैछ, उसलाई थोरै नै थाहा थियो कि कठिन समय उसको बाटोमा आउँदैछ।
जुन दिन उसले आफ्नो आइडललाई भेट्यो। जवानले महसुस गरे कि उनी हास्य पुस्तक पढ्दैछन्।
केटाको रूपमा, यो स्पिन क्लब इन्टर्सेओनलसँग खेल्न राफिनहको सपना थियो। यो पोर्तो एलेग्रीमा सबैभन्दा लोकप्रिय फुटबल क्लब हो। दुर्भाग्यवस, त्यस्ता इच्छाहरू कहिल्यै पूरा भएनन्। ठूलो क्लबले राफिन्हालाई (तीन पटक) अस्वीकार गर्‍यो धेरै पातलो भएकोले
उनको पुन: समावेशीकरणको सम्भावित कारणको लागि क्लबमा प्लाईस बहिरा कानमा परे। रफिन्हाका एजेन्टले कारणहरू हेर्न अन्तर्देशीयलाई भने; कि विश्व मा सबै भन्दा राम्रो खेलाडी छोटो, हेर्न को लागी छन् लिओनेल मेस्सी एक केस अध्ययन को रूप मा। अझै, सोकर पावर हाउसले गरीब रफिन्हा स्वीकार्न अस्वीकार गर्‍यो।
मनिन्हो बेलोली, उनका बुवा र परिवारका अन्य सदस्यहरूले हार मान्न प्रोत्साहित गरे। कुनै समय मा, Rapinnha साहस अप सार र अर्को यात्रा को लागी। उनले hours घण्टा यात्रा गरे (पोर्टो एलेग्रीदेखि सान्ता क्याटरिना) हरियो घाँसहरूको लागि खोजीमा। आफ्नै शब्दमा;
अस्वीकृति पछि, मैले सकेसम्म चाँडो पोर्टो एलेग्रीमा रेस्टिa्ग छोडिदिए। मैले बसमा केही घण्टा सामना गरें, व्यावहारिक रूपमा केहि खाइनँ।
रफिन्हा जीवनी - प्रख्यात कथाको लागि मार्ग:
सुरुnelको अन्त्यमा आशा आयो। सान्ता क्याटेरिनामा रहेको ब्राजिल फुटबल टीम अभा फुटेबोल क्ल्यूबले उनका लागि ढोका खोल्यो। तिनीहरूको कोच पातलो केटाको हेरचाह गर्थे। त्यहाँ, रफिन्हाले एक सहज पेशेवर क्यारियर शुरू गरे।
रफिन्हा अन्ततः एकेडेमीमा बसोबास गर्छिन् जसले उनलाई परिवार जस्तो व्यवहार गर्दछ।
फेब्रुअरी २०१ 2016 मा, अवाएसले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई ज्याला तिर्ने सवालहरू गर्न थाले। यसले उनीहरूलाई आफ्नो अनमोल गहना (राफिन्हा) यूरोपमा बेच्ने कठोर निर्णय गरिरहेको देख्यो।
शोकाकुल रूपमा, डेको - पूर्व चेल्सी र एफसी बार्का स्टारले राफिन्हालाई युरोपमा मद्दत गरे। उनी पुर्तगाली पक्ष भिटेरिया गुमेराइसमा हस्तान्तरणको पछाडि एजेन्ट बने।
डेपोले राफिनहको क्यारियरमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
रफिन्हा बायो - सफलता कहानी:
परिवारलाई पछाडि छोड्दा र नयाँ संस्कृतिसँग व्यवहार गर्ने एउटा असाधारण शिक्षा अनुभव थियो। ब्राजिलियाली उनले पोर्तुगल मा एक meteoric वृद्धि सहने को रूप मा अनुकूलन गर्न सक्छन्। आफ्नो पहिलो सत्रमा, राफिन्हाले २०१ó विट्रिया गुमेरास ब्रेकथ्रू प्लेयर अफ द ईयरको पुरस्कार जितिन्।
मे २०१round को वरपर, क्लबले उनलाई स्पोर्टिंग सीपी, को घरमा स्थानान्तरण गर्‍यो क्रिस्टियानो रोनाल्डोको युवा दिनहरू। आफ्नो नयाँ निवासमा, रफिन्हा शक्ति देखि एक शक्ति मा गए। उहाँ साथमा यो स्पष्ट थियो Bruno Fernandes हरियो र गोरेलाई टाçा डे पोर्चुगल र टाउ दा लिगा दुबै जित्न सहयोग पुर्‍यायो।
वास्तवमा खेलमा केही महिमा दिनहरू थिए।
फ्रान्सेली संस्कृतिको स्वाद लिनको लागि, रफिन्हाले अर्को सपना चाल पाए। यस पटक, गर्न रेनेस - एक क्लब उसले तेस्रो स्थान Ligue १ समाप्त र एक च्याम्पियन्स लीग योग्यता प्राप्त गर्न मद्दत गर्‍यो।
आफ्नो श्रम को फल फसलको सट्टा, अर्को मौसम रेन्नेस संग, रफिन्हा अगाडि बढ्नुभयो। उनले आफ्नो मुटु पछ्याए - यस पटक, आदरको साथ। रफिन्हाले लीड्स युनाइटेडको कलको सम्मान गर्‍यो मार्सेलो बाइल्सा। नबिर्सनुहोस्, उहाँ फुटबलको महान व्यवस्थापक मध्ये एक हुनुहुन्छ।
आफ्नो जीवनी लेख्दा, रफिन्हाको लचिलोपन मेल खाँदैन। उनी लीड्स युनाइटेडका लागि एक ठूलो खेलाडी हुन् - सबैभन्दा परम्परागत अंग्रेजी टोली मध्ये एक। गोल स्कोरिंगको साथ ब्राजिलको साझेदारी पैट्रिक बामफोर्ड उत्कृष्ट छ। विger्गरको साथ उसको अगाडि कम्बो - ज्याक ह्यारिसन - धेरै शानदार क्षण उत्पादन गरेको छ। निस्सन्देह, रफिन्हाले जताततै फुटबलमा नेतृत्व गरेका सफलता देखेका छन्। बाँकी, हामी भन्छौं, इतिहास हो।
राफिन्हाको प्रेमिका को हो? … ऊसँग श्रीमती वा बच्चा छ?
प्रख्यात भए पछि, प्रशंसकहरूले उनलाई आफ्नो जीवनको महिला घोषणा गर्ने आशा गर्नु सामान्य हो। २०२१ को सुरुमा, हामी बुझ्छौं कि वि the्गर अझै एक्लो छ तर निजी रूपमा मिसिनको लागि तयार देखिन्छ। यसले बुझाउँछ कि राफिन्हाको एक प्रेमिका हुन सक्छ जसलाई उनले आफ्नी पत्नी र आफ्ना बच्चाहरूको आमा मान्दछन्।
कुनै पनि फुटबलरलाई दुई बर्षको अन्तरालमा चार पटक व्यावहारिक रूपमा स्थानान्तरण गर्न सजिलो हुँदैन। तर किन रफिन्हालाई विदेशमा छिटो अनुकूल गर्न यति सजिलो छ? यस खण्डमा, हामी तपाईंलाई पिच बाहिर उसको व्यक्तित्वको बारेमा बताउनेछौं।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, एक समय अस्वीकृत केटा आफ्नो नम्र इतिहास मा शक्ति को आकर्षित गर्दछ रेस्टिंगाबाट प्रिमियर लिग सम्म। रफिन्हा स्वीकार्छन् किनभने उनीहरु उनीहरुसंग उनीहरुका सपनाहरु उनीहरु मार्फत गराउने परिवारलाई एक वचन दिए। ऊ कहिले पनि विकल्पको लागि विफलता लिदैन। रफिन्हाको शब्दमा;
हरेक दिन, म आफैंलाई भन्छु कि यो सपनाको बारेमा मात्र होईन। यो मेरो आमा बुबा, भाइबहिनी र आफन्तहरूको हो।
यी तिनै हुन् जसले म जान्दछु म जान्दछु र शुरूदेखि नै मसँग छु। म सँधै नाम लिन्छु - रेस्टिंगा - जहाँ म जान्छु। धेरै मानिसहरूलाई मेरो नाम थाहा छ, तर मेरो ईतिहास छैन।
रफिन्हा जीवनशैली तथ्यहरू:
दक्षिण अमेरिकीको लागि, खुशी छालहरूमा आउँछ। विदेशी कारहरू फ्ल्याशिंग गर्नुको सट्टा, रफिन्हाले आफ्नो समुद्री किनारमा सार्वजनिक सार्वजनिक गर्न रुचाउँछिन्।
यसरी उसले आफ्नो फुटबल पैसा खर्च गर्दछ।
2015 बर्ष भन्दा बढी पेशेवर अनुभव संग (२०१ from देखि सुरू), यो निष्पक्ष छ कि ऊ धनी छ। हामी राफिन्हाको कुल सम्पत्ति करीव million० लाख पाउन्ड हुने अनुमान गर्छौं।
रफिन्हाको पारिवारिक जीवन:
मनिन्हो बेलोलीको परिवारमा, प्रेम कडा र गहिरो बग्दछ। यसले कहिलेकाँही कसरी तिनीहरू लामो यात्रामा आयो भनेर पुरानो भावना दिन्छ। यहाँ, रफिन्हा बार्सिलोना मा - Catalunya को दृश्य र घामको मजा लिन आफ्नो बुबा, आमा र भाइ लिन।
ब्राजिलियनका लागि पारिवारिक समय खुशीका समयहरू हुन्।
यस सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई तिनका आमाबुवा र परिवारका सदस्यहरूको बारेमा थप तथ्यहरू बताउने छौं। थप विज्ञापन बिना, च्याट गरौं।
रफिन्हाको बुबाको बारेमा:
आफ्नो जवान बुबाको फोटो हेरेपछि धेरै प्रशंसकहरूले सोधेका छन् ... के रफिन्हा ग्रहण गरियो? हामीले अनुसन्धान गरेका छौं, र उत्तर हो होईन! आफ्नो बायो लेख्ने समयमा, रफिन्हाको बुबा 40० को दशकमा हुनुपर्छ।
मनिन्होका आफन्तहरूको केही इटालेली छन्। उनी रफिन्हाले आफ्नो परिवारलाई आशिष् दिन फुटबलको प्रयोगमा गर्व गर्दछन्। कसरी दुवै बुबा र छोरा फिट, यो एक विशेष कसैलाई मनिन्हो जस्तै जवान बुबा हुन।
तपाईं को भावना अझै जवान छ र तपाईं एक छोरो छ कि धेरै सफल छ।
राफिन्हाकी आमाको बारेमा:
लीड्स युनाइटेड फुटबलरले आफ्नी श्रीमतीलाई सबैभन्दा धेरै मन पराउनेछ, उसको बुबा सबै भन्दा राम्रो र आफ्नो आमा सबैभन्दा लामो हुन्छ। उनी कसरी तयार गर्ने भनेर सिकाउने काम गर्दछिन र चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्दा सामना गर्दछन्। राफिन्हाको आमा मूल रूपमा ब्राजिलियन हो।
रफिन्हाको आमालाई भेट्नुहोस्। तिनीहरू धेरै मिल्दो देखिन्छन्।
राफिन्हा भाइको बारेमा:
ग्लोबोस्पोर्ट ग्लोबोका अनुसार फुटबल खेलाडीको एक भाइ छ जो ब्राजिलमा बस्दछ। ऊ केवल उनलाई प्राय: छुट्टीहरूमा भेट्न जान्छ। यस्तो देखिन्छ कि उसको जेठो भाइले फुटबललाई पेशाको रूपमा लिएन।
राफिन्हाका आफन्तहरूका बारे:
उसको हजुरबा हजुरआमासँग सुरु गरौं। रफिन्हाको हजुरबुवाको नाम ओस्मार हो, इटालियनको रूपमा राम्रो परिचित उनले १ 1960 s० को दशकमा उनको फुटबल खेले। उनका काका सिउ ओस्मार ब्राजिलको मोन्टे कास्टेलोमा खेले। उनले कोबालसँग पनि प्रदर्शन गरे जुन परिवारको छिमेकको अर्को परम्परागत टोली हो।
अझ चाखलाग्दो कुरा, रफिन्हा काकाको अर्को कामु, दुदु, इन्टर मिलनका लागि खेले। यो नातेदार आफ्नो बुबा, मनिन्हो को धेरै नजिक छ। दुबैले बाल्यावस्थाका दिनहरू रेस्टिंगा फ्लड प्लेनमा सँगै फुटबल खेल्थे।
राफिन्हा अनटाल्ड तथ्यहरू:
तथ्य # १- मोन्टे कास्टेलोको कष्ट, उसको बाल्यकाल क्लब:
यो निराश एकेडेमीको कथा हो जहाँ रफिन्हाले फुटबल सिकेकी थिइन्। तिनीहरूको कष्ट यो हो कि जब अन्य फुटबल संस्थाहरूले राफिन्हाको क्यारियरमा समावेश क्लबहरूको उल्लेख गर्छन्, तिनीहरू मोन्टे कास्टेलोलाई बेवास्ता गर्छन्। यसको प्रवक्ताका अनुसार;
फिफाले हामीलाई चिनेन जुन फुटबलरको गठन भयो। त्यस पछि हामी बिहान सबेरै उनको परिवारको घरमा गयौं र रफिन्हालाई हातले समातेर तालिम लिन जान भ्यानमा राख्यौं। सानो छँदा, हामी एक समान, जुत्ता र बलहरु उनको प्रगति सम्भव बनाउन को लागी।
हामी ती हुन् जसले राफिंठालाई माथि लियो र अरू कसैले होइन कि उसलाई पक्राऊ गरी सकेको थियो। हामी साना प्रशिक्षण समूह हौं जुन उहाँलाई स्थानान्तरण कोषको केहि चाहिन्छ।
तथ्य # १- औसत ब्राजिलियन नागरिकसँग उसको तलब तुलना गर्दै:
पाउन्डमा तलब ब्रेकडाउन (£)
ब्राजिलियन वास्तविक (R $) मा तलब ब्रेकडाउन
प्रति वर्ष: £ 3,124,800 R $ 22,448,322
प्रति महिना: £ 260,400 R $ 1,870,693
प्रति हप्ता: £ 60,000 R $ 431,035
प्रति दिन: £ 8,571 R $ 61,576
प्रति घण्टा: £ 357 R $ 2,565
प्रति मिनेट: £ 5.9 R $ 43
प्रति सेकेन्ड: £ 0.09 R $ 0.7
तपाईंले राफिन्हा हेर्न शुरू गर्नुभयोबायो, यो उसले कमाएको हो।
सामान्यतया, ब्राजिलमा काम गर्ने एक व्यक्तिले लगभग ,,8,560० BRL मासिक आर्जन गर्दछ। यस्तो नागरिकले १hin बर्ष र दुई महिना काम गर्नुपर्दछ रफिन्हाको मासिक तलब कमाउन।
तथ्य # १- टैटू तथ्य:
रफिन्हा ट्याटूहरूले आफ्नो ईतिहासको बारेमा धेरै बताउँछन्।
उनीसँग केहि ईंकहरू छन् भन्दै एक विशाल अधोरेखित छ। सोकर स्टारसँग सावधानीपूर्वक तैयार गरिएको ट्याटूहरूको अधिकता रहेको छ। तिनीहरू आफ्नो हात, खुट्टा र पछाडि जताततै छन् - प्रत्येकले आफ्नो ईतिहासको अनौंठो कथा भन्दै।
तथ्य # १- आफ्नो छिमेकीलाई फिर्ता दिने:
त्यो गरिरहँदा, लीड्स युनाइटेड विger्गरले बच्चाहरूलाई आग्रह गरे उनीहरूको सपनालाई कहिल्यै हार नमान्नुहोस्, र तिनीहरूको पछि लाग्नुहोस्। यो किनभने आफ्नो सपना साकार पार्न सक्ने एक मात्र व्यक्ति आफैं हुन् र अरु कोही छैनन्।
तथ्य # १- फिफा तथ्या :्क:
रफिन्हा त्यस्ता एक फुटबलर हुन् जसले फुटबल सिम्युलेशन भिडियो गेममा छिटो बढावा लिन्छन्। तीव्र विger्गरले समान समग्र रेटिंगहरू साझा गर्दछ रिचर्लासन तर कम सम्भावना। आफ्नो गति र चपलताको लागि धन्यवाद, रफिन्हा निश्चित रूपमा फिफा प्रबन्धक मोड प्रेमीहरूको लागि एक निश्चित खरीद हो।
लीफ युनाइटेड फुटबलर - राफिन्हाको जीवनी हामीलाई एउटा कुरा सिकाउँछ। कि यो कठिन समय को माध्यम ले धेरै साहस लिन को लागी। हाम्रो लेखोटमा अवलोकन गरिए अनुसार ब्राजिलियनले अस्वीकारको सामना गर्नुपर्दा उसको सपना कहिल्यै त्यागेन
आज, उहाँ सँगसँगै कार्लोस Vinicius (साथी भाई) इ England्ल्यान्ड मा आफ्नो पहिलो सीजन मा सफलता देखेको छ। रफिन्हाका लागि पहिलो प्रिमियर लिग गोल (एभर्टनको बिरूद्ध) चाँडो आयो। यो तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ कि ऊ विश्वको सबैभन्दा कठिन लिगमा अनुकूलन गर्न सक्छ।
रफिन्हाको परिवारले उनको कुरा बदले कि उनी आफैंले पहिले नै भएको परिवर्तन गर्न सक्दैनन् भनेर बुझाउनको लागि हामी उनलाई धन्यवाद दिन्छौं। यसले उसलाई अगाडि बढ्न, जान दे र यसलाई पार गर्न शक्ति दिए। आज उनका बुबाआमा, चिन्तित र अन्य जो उनको छेउमा उभिएका थिए अब उनी आफ्नो फुटबलको महिमामा सहभागी छन्।
प्रिय पाठकहरु, यस संस्मरणमा तपाईको समयको लागि धन्यबाद। कृपया टिप्पणी अनुभागमा साझेदारी गर्नुहोस्, तपाईंको विचार लिड्स फुटबलर वा कुनै पनि अवलोकन जुन हाम्रो लेखनमा राम्रो देखिदैन। रफिन्हाको बायोको द्रुत सारांश प्राप्त गर्न, हाम्रो तालिका सारांश प्रयोग गर्नुहोस्।
पूर्ण नामहरू: राफेल डायस बेलोली।
जन्म मिति: डिसेम्बर १ 14 1996 XNUMX को १th औं दिन।
सहरको जन्म: पोर्टो एलेग्रे, ब्राजील।
अभिभावक: मनिन्हो बेलोली (पिता) आमा अज्ञात छ।
पारिवारिक मूल: रेस्टिंगा, ब्राजील।
मीटरमा उचाई: 1.76 m
खुट्टामा उचाई: F फिट inches इन्च।
खेल्ने स्थिति: विger्गर
Stane Rennais फुटबल डायरी
एडुआर्डो कामिभाइ बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Helder कोस्टा बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य